FES waxay ka bilowdey indho indhaynta Indian gudaha GeoSmart India - Geofumadas
FES waxay ka bilowday Indiyaarka Indiyaanka ee GeoSmart India
Disember, 2019 Geospatial - GIS, tabo cusub
(LR) Lieutenant General Girish Kumar, General Surveyor of India, Usha Thorat, Gudoomiyaha gudiga gudoomiyeyaasha, FES iyo gudoomiye kuxigeenkii hore ee Bangiga keydka India, Dorine Burmanje, Co-President, Global Information Geospatial Information Management. Qaramada Midoobay (UN-GGIM) iyo Jagdeesh Rao, oo ah maamulaha guud, FES, intii lagu gudajiray furitaanka Shirka Indo Indha indho ee Shirweynihii GeoSmart India ee Hyderabad Talaadadii.
Meel u furan xog aruurinta dhawrista deegaanka, bilaabida horumarinta bulshada
Mu'asasada loogu talagalay nabadgelyada deegaanka (FES), oo ah hay'ad samafal oo ka shaqeysa ilaalinta kaymaha, dhulka iyo ilaha biyaha ee saldhigyada, ayaa bilaabay barnaamijkeeda xog furan ee loogu magac daray "Observatory of India maalinta ugu horeysa ee shirka GeoSmart India, maanta
Lt Girish Kumar, kormeeraha guud ee Hindiya, Usha Thorat, Gudoomiyaha Gudiga Gobalada, FES iyo gudoomiye kuxigeenkii hore ee Bangiga Kaydka ee India, Dorine Burmanje, Kuxigeenka Madaxa Maamulka Xogta Caalamiga ah ee Qaramada Midoobay. -GGIM) munaasabadda ayaa goob joog ka ahaa.
Indha indheeyayaasha Indian ayaa ururiya in kabadan 1,600 lakab oo xog ah oo kusaabsan xuduudaha bulshada, dhaqaalaha iyo deegaanka. Waxay si xor ah u heli kartaa ururada bulshada rayidka ah, ardayda, waaxyaha dowladda iyo muwaadiniinta, waxaana ku jira 11 qalab tikniyoolaji ah oo gacan ka geysanaya fahamka gobolka iyo qorsheynta wax ka qabashada dhowrista kaymaha, dib u cusbooneysiinta ilaha biyaha iyo horumarinta nolosha bulshada. .
Aaladahaani waxay ka shaqeyn karaan khadka tooska ah ee casriga casriga casriga waxaana lagu heli karaa luqadaha maxalliga ah oo ay fududahay in la fasiro koodhadhka waxaana xitaa isticmaali kara dadka buugaagta suugaanta ah. Tusaale ahaan, Qalabka Qiimaynta Muuqaalka iyo Qalabka Soocelinta ee Isku-Darka, ama CLART, waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo ogaan lahaa aagagga ugu wanaagsan ee loogu talagalay dib-u-soo-celinta biyaha dhulka hoostiisa ee barnaamijka MGNREGA. GEET, ama Nidaamka Raadinta Xuquuqda GIS, wuxuu abuuraa wacyi galin ku saabsan xuquuqda beelaha la soocay iyadoo la ilaalinayo u qalmanaanta heerka qoyska. Sidoo kale, sanduuqa Maareynta Maareynta Isku-dhafan, ama IFMT, waxaa ku jira aalado caawiya labadaba xog aruurinta iyo falanqaynta iyo ka caawiya waaxaha keymaha inay u diyaariyaan qorshayaasha shaqo muddada-dheer.
Munaasabadda daah-furka, Jagdeesh Rao, maamulaha FES, wuxuu yiri: «Ka shaqeynta arrimaha kaynta, dhulka iyo biyaha waxay u baahan yihiin aragti muuqaal ah, maadama kheyraadkaani ay ku fidayaan xuduudaha aadanaha iyo aragtida dhulku waxay caawineysaa istiraatiijiyadda dhawrista noocyada halista ku jira, dhowrista kheyraadka sida biyaha iyo biomass iyo soo saarista ilaha baahiyaha aadanaha. Sawirada satalaytka ayaa bixiya aragti ka fiican isha shimbirta. Badanaa, waxaa jira jaangooyooyin ballaaran oo xog ah, algorithm iyo qalab laga heli karo hay'ado kaladuwan, laakiin aan lagu heli karin xirfadleyda iyo shakhsiyaadka, gaar ahaan hab is fahamsiin ah. Dadaalkan, FES kaliya kuma caawineyso siyaasad-dejiyeyaasha iyo maamuleyaasha sidii ay u gaari lahaayeen go'aano wanaagsan, laakiin sidoo kale waxay ku tababarayaan dadka ku nool tuulooyinka iyo meelaha fog-fog si ay mustaqbal wanaagsan u yeeshaan naftooda » .
“Waxaa jirta baahi loo qabo horumar waara oo loo wada dhan yahay isla markaana tikniyoolajiyadda casriga ah ayaa door weyn ka ciyaari doonta. Horumar waara waxaa loola jeedaa waxyaabo kaladuwan oo loogu talagalay dadka kaladuwan, laakiin qaab ahaan, waxay isku dayeysaa inay is waafajiso baahiyo kala duwan isla markaana dejiso qorsheyaal mudda dheer ah, ayuu yidhi Thorat hore, isagoo carrabka ku adkeeyay in macnaha guud ee waara, ay muhiim tahay in la garto in “halka in raadadka deegaanka ee saboolka ahi aad u yar yahay, isbeddelka cimilada iyo lumitaanka noolaha ayaa saameeya kuwa liita kuwa taajirsan.
Burmanje wuxuu yiri: “Waxaa loo baahan yahay iskaashi balaaran oo caalami ah waaxda geospatial-ka si loo kobciyo hal-abuurka, kobcinta firfircoonaanta. Koox ballaarineysa shakhsiyaadka waxay abuurayaan saameyn weyn oo macluumaad geospatial ah. UNGGIM ayaa door hoggaamineed ka ciyaaraysa arrintan, iyadoo garwaaqsaneysa baahida loo qabo xogaha geospatial go'aan qaadashada. Waa muhiim in waaxda dowladu ay dib isugu soo uruuriso tsunami macluumaadkan ah.
Ku saabsan FES
FES waxay ka shaqaysaa ilaalinta dabiiciga iyo ilaha dabiiciga iyada oo loo marayo waxqabadka wadajirka ah ee bulshada maxalliga ah. Nuxurka dadaallada FES wuxuu ku wajahan yahay helitaanka kaymaha iyo ilaha kale ee dabiiciga ah ee ku jira dhaqdhaqaqyada dhaqaale, bulsheed iyo jawiga deegaanka ee miyiga. Laga bilaabo Sebtembar 2019, FES waxay la shaqeyneysay 21,964 xarumo tuulo oo ku kala yaal 31 degmo oo ka kooban sideed gobol, iyagoo ka caawinaya bulshada tuulooyinka inay ilaashadaan 6.5 milyan oo hektar oo dhul isku mid ah, oo ay ku jiraan dhul cidla ah, dhul duur ah oo duugoobay iyo dhul daaqsimeedka Panchayat , oo si togan u saamaysay 11.6 milyan oo qof. FES waxay taageertaa Panchayats iyo guddi hoosaadyadooda, guddiyada kaymaha tuulada, guddiyada hawdka gramya, ururada isticmaaleyaasha biyaha iyo guddiyada dooxada si loo wanaajiyo maamulka khayraadka dabiiciga ah. Ayadoon loo eegayn qaabka hay'addu, hay'addu waxay ku dadaaleysaa xubinnimada guud iyo helitaanka siman ee haweenka iyo masaakiinta go'aan qaadashada.
Marwo Debkanya Dhar Vyavaharkar
Post Previous«Previous AulaGEO, waa koorsada ugu wanaagsan ee xirfadlayaasha Injineerinka
Post Next Waa maxay isolines - noocyo iyo dalabyoNext »